Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Daawo:- Safiirka Marekanka Oo Booqday Magaalada Boosaaso.
Daawo:- Safiirka Marekanka Oo Booqday Magaalada Boosaaso.
Safiirka dalka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya, Donald Yamamoto ayaa maanta booqday, magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ahna xarunta gobolka barri, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni.
Kulanka labada mas’uul oo warbaahintu dibadda ka joogtay, ayaa looga hadlay taageerada dowlada Maraynkanku siiyo Soomaaliya, gaar ahaanna maamulka Puntland ee dhinacyada, amniga, kobcinta dhaqaalaha iyo arrimaha banii’aadanimada.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlada Puntland, Maxamed Cabdiraxman Dhabancad oo kulankaasi ka warbixiyay ayaa sheegay in qodobadii laga hadlay la isku afgartay,islamarkaana kulanka ku soo dhammaaday jawi wanaagsan sida uu hadalka udhigay.
Booqashada safiirka Maraykanku Donald Yamamoto Uu ku tegay magaalada Boosaaso oo aan la sii shaacin ayaa qaadatay saacado kooban waxaana markiiba uu dib ugu noqday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka.